ရွှေအကြောင်း ရောင်းပြီးမှသိ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ရွှေအကြောင်း ရောင်းပြီးမှသိ..
Posted by မောင်ရိုး on Sep 22, 2011 in Community & Society, Know-How, DIY | 11 comments
ဟို တ နေ့ကပဲ ရွှေဈေးတက်တယ် ကြားပြီး အိမ်ကမဟေသီ ရွှေရောင်းချင် တယ် ဆိုလို့ သူ စုထား တဲ့ အတို အစ လေး သွားရောင်း ပေး ခဲ့ရ တယ် ။။ ဝယ် စဉ် တုံး က ခြောက် သောင်း ဈေး ။ အခု ၇၀၀၀၀၀ ကျော် ဆို တော့့နည်း နည်းမြတ် မယ် အထင် နဲ့ ပေါ့ ၊ ဒီလို နဲ့ ဆာမိ တို့ နှစ် ယောက် တရုတ် တန်း က ဆိုင် ခွဲ (၃ ) ခုလောက် ရှိ တဲ့ ရွှေဆိုင် ကြီး ကိုရောက် ခဲ့ ပါတယ် — ရွှေဆိုင် ကြီးက ခန်းခန်း နားနား နဲ့မီး တွေ ထိန် လို့–အရောင်း စာရေး မလေး တွေကလဲ ပြုံးလို့— ဒီလိုနဲ့အထဲ ဝင် ပြီး ရွှေ ပြန် ရောင်း မယ်လဲ ဆို ရော စောစော ကပြုံး နေ တဲ့ မျက် နှာလေး တွေ နည်း နည်း ရှုံ့သွား သလို ပဲ—ဆာ မိ လဲ ဘောက် ချာ နဲ့လက်စွပ် လေး ကို တင် ပေး လိုက် တယ် ၊ခဏ နော် –ဆို ပြီး ဆိုင် တာဝန် ခံ ကို တ တွတ် တွတ် ပြော နေ တယ် –ဆာမိ တို့လဲ ဟို ငေး ဒီငေး ပေါ့ –တခါတလေ အထဲ ရောက် တုန်း ငေး ရ တာ လေ — အန် ကယ် ရပြီ လို့စာရေး မ လေး ကခေါ် တော့မဟေသီ ကို လက် တို့ပြီး ကောင် တာကို သွား လိုက် တယ် –လက် စွပ် က ဝတ် လို့လျော့တယ်ဆို ပြီး calculator ကို တ ချောက် ချောက် နှိတ် ပြီး တွက် လိုက် တာ —–၁၅၀၀၀၀ ဝန်း ကျင် ပဲ ရ မယ် တဲ့ —ဆာမိ တို့ဝယ် ထား တာ ၂၁၀၀၀၀ ကျော် ပါ —ပြန် ရောင်းရင် အလျော့ တွက် ၊ လက် ခ ၊ ကျောက် ဖိုး၊ရှုံး မယ် ဆို တာ သိ ထား ပါ တယ် — ဒါပေ မဲ့ရွှေ ပေါက် ဈေး ၁၀၀၀၀၀ ကျော် တက် သွား တာ တောင် ၆၀၀၀၀ ကျော် လေက် ရှုံး နေ သေး တယ် –ဆာမိ ကတော့မရောင်း ချင် ဘူး –မဟေသီ ကပြန် ထွက် ရ မှာအား နာ လို့လား မ သိ — ရောင်း ခဲ့ လေ ရဲ့—-
ဆာမိ လည်း အိမ် ပြန် ရောက် တော့လမ်း ထိတ် က သူ ငယ် ချင်း ပန်းတိမ် ဆရာဆီ သွား ပြီး ပွား လိုက် မိ တယ် –ဒီတော့မှ ဆာမိ တို့ အား လုံး ၊ ဝယ် သူ အား လုံး မသိ ကြ တဲ့ရွှေဆိုင် ၊ပန်း တိမ် တို့ ရဲ့အတွင်း ရေး တွေ ကို သိ လိုက် ရတယ် ဗျို့ —-
တကယ် တော့သူတို့ရဲ့ကျောက် ထည် ကို ၁၅ ပဲ ရည် မ လုပ် ကြ ဘူး ၊ ၁၃ ပဲ ၁၄ ပဲ ရည် နဲ့ ပဲ လုပ် တာ ၊ သူ တို့ရောင်း တော့၁၅ ပဲ ရည် လို့ပဲ ပြော ရောင်းပါ တယ် — ဒီခေတ် ဈေး နဲ့ ဆို ၁ ကျပ် သား မှာ ရွှေ (၁) ရည် လျော့ရင် ၄ သောင်း ကျော် လောက် ကွာ ပါ တယ် –ပြန် ဝယ် ရင် ဆိုင် တော် တော် များ များ က ၁၃ ပဲ ၁၄ပဲ ဈေး နဲ့ ပဲ ဝယ် ကြ ပါ တယ် —ပို ဆိုး တာ က စိန်ထည် ကို ၁၁ ပဲ ၂ ရွေး ရည် နဲ့လုပ် တာ ပါ အ ကောင်း ဆုံး လုပ် တဲ့ ဆိုင် က ၁၂ ပဲ ရည် နဲ့လုပ် တာ — ဒါ ပေ မဲ့ဆိုင် ၁၀၀ မှာ ၉၀ က ၁၅ပဲ ရည် လို့ပဲ ပြော ရောင်း တယ် —ဒီ ကြား ထဲ ရောင်း တော့ဒစ် ဂျစ် တယ် ချိန် ခွင် ဝယ် တော့ဗမာ ချိန် ခွင် ၊ အခန့်မ သင့်ရင် အလေး ချိန် က ကွာ ရော ။။ ဆာ မိ တို့ကဘယ် တွက် တတ် မ လဲ —ဝယ် ချင် ရင် လက် ညှိုး ထိုး ပြီး ကျသင့်ငွေ ကို ပေး ခဲ့ရ တာ –ဘာ မှ လဲ မ မေး ရဲ ဘူးရှင်း ပြ လဲ နား မလည် ဘူး –ဒီတော့ဝယ် သူ ရဲ့အား နဲ ချက် အပေါ် အ ခွင့်ရေး ယူကြတာ ပေါ့ဘယ် ဆိုင် ကများ မှတ် နဲ့ တိုက် ပြ လို့လဲ ၊ ပြန် ဝယ် တော့မှ မီး ဖုတ် တာတို့ ငရဲ မီး နဲ့စား ကြည့်တာတို့လုပ် တာ –ဝယ် သူ ကတော့ဝယ် ချင် ရင် ခံ ပေါ့ ။။။ ဒီ အ ကြောင်း တွေ ကို ရှင်း ပြ ပြီး သူငယ် ချင်း အ ကြံပေး တဲ့အ တိုင်း အခေါက် ချွတ် ဖို့ပြော ပြ တယ် –မဟေသီဆီ မှာ ရှိ တဲ့ အတိုအစ အပိန်အလိမ် လေး တွေ ကို စု လိုက် တော့၁ ကျပ် သား လောက် ပေါ့။ နောက် နေ့မှာ ပဲ ပန်း တိမ် ဆရာဆီ မှာ ရွှေ ချွတ် ကြတယ် ။ ခဏ နေ တော့ရွှေ တုံး လေး ရ လာ တယ် ။ချိန် ကြည့်တော့၁၁ ပဲ သာ သာ ၅ ပဲ ကျော် လောက် ဘယ် ပျောက် သွား မှန်း မ သိ —-သူ ငယ် ချင်း က ပြော ပါ တယ် –ရွှေ ညံ့ လို့တဲ့–ဟုတ် ပါ တယ် ဂ ဟေ တွေ များ ၊ ရွှေ ညံ့ အောင် စပ် ထား ရင် ချွတ် လိုက် လို့ကတော့သွား ပြီ ပေါ့——
နောက် ဆုံး မှာ တော့ဆာမိ လည်း မဟေသီကို အာမ ခံ ထား တာ ရှင်း ရ ခက် ချေပြီ ။ ၁၅ ပဲ လောက် ကျန် မယ် ပြော ထား တာ —-ကဲ –ဒီတော့ဆာမိ လည်း မဟေသီမသိ အောင် ဖွက် ထားတဲ့ မြန်မာ ဘတ် ငွေ ထဲ က ၁၇၀၀၀၀ ကျော် ကို နား ငြီးသက် သာ စေ ရေး စိုက်ပေး လိုက် ရပါ တယ် —- ညနေ ဘက် အိမ် ရောက် တော့ဆာမိကို ထမင်း ဝိုင်း နဲ့ကြို နေ လေ ရဲ့ –ရွှေရောင်း ပြီး အမြတ် ရ သွား တဲ့မဟေသီ က ကြက် ကင် တစ် ကောင် ဝယ် ကြွေး တယ် ဆို ပဲ –အိမ် က လေးနှစ် ယောက် ကတော့စားမန်ခုတ်လို့ဆာမိ ကတော့ လည်ချောင်းရိုးတချောင်းကို မကုန်အောင်စုပ်ရင်း နေ့ လည်က စိုက်ပေး လိုက်ရ တဲ့မြန် မာဘတ် ငွေ လေးတွေအတွက် နှ မျောတသ ၊သတိယလျက်———–!
( ၇၃၀၀၀၀ ဈေး ခန့် တွင်ရောင်း ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည် )
surmi has written 112 post in this Website..
ဟုတ်ပါတယ် .. ရွှေဈေးတွေ ခေါင်ခိုက်အောင် တက်သွားတယ် … မနေ့က အခေါက်သား မီးလင်းရွှေတောင် ခုနှစ်သိန်းခြောက်သောင်း ငါးထောင်ကျော်နေပြီ … မလိုအပ်လျှင် မထုခွဲတာ အကောင်းဆုံးပါ … စီးပွားရေးလုပ်တာနဲ့ ဈေးရောင်းတဲ့ နေရာမှာ အားနာနေလျှင် အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး … ။
အကောင်းဆုံးက ရွှေလုပ်မယ်ဆိုလျှင် အခေါက်ဝယ်တာကောင်းပါတယ် …. ပုံဆန်းဆန်းလုပ်မရတာပဲ ရှိမယ် ..ပြန်ရောင်းလည်း သိပ်မကွာဘူးလေ … တချို့ စိန်တွေကို 13ပဲရည်နဲ့ လုပ်တယ် ကြားတယ် … ဘာလို့လဲဆိုတော့ .. စိန်ရဲတန်ဖိုးကကြီးတော့ စွန်ကုတ်ပြုတ်သွားမှာ စိုးလို့ … သတ္တုများများ ရောရတယ်တဲ့ ..အခုပြောတာ 11ပဲဆိုတော့ ..ဟင့်
ဟုတ်ပ အခုတစ်လော ရွှေဈေးတွေက တက်လိုက်ကျလိုက် ရောင်းလိုက်ရင်တော့
ဘယ်တော့ ရောင်းရောင်း အရှုံးပဲ
ဒါပေမယ့် အရင် ရွှေဈေး (25000) လောက်တုန်းက လုပ်ထားတာကတော့ မြတ်တယ်ဆိုပဲ
အလျှော့တွက်လက်ခ သက်သာချင်ရင်တော့ လက်ဝတ်ရတနာမလုပ်ပဲ ရွှေအခေါက်ဝယ်ပေါ့။
ရွာထဲက သဂျီးအိမ်တိုင်အောက်မှာ မြုပ်ထားတဲ့ ဂျာပန့် ခတ်က ဒင်္ဂါးပြားတွေ အထုတ်လိုက်ရှိတယ်။
ဆာမိပြောတဲ့ ဆိုင်မှာ သွားရောင်းမယ် လုံးဝ မရှုံးလောက်ဘူးဆိုတာ သိတယ်။
ရှယ်ယာ လိုချင်တဲ့ ရွာသားတွေ သဂျီး အိမ်တိုင်တွေ အောက်ကိုသာ အကုန်တူးပြီးသာ ရသလောက် တူးယူကြပါ။
ကလေး နှစ်ယောက် ရတဲ့ အထိတိုင်
မြန်မာ့ ဘတ်ငွေ တွေ လက်ကိုင်ထားနေရဆဲ ပါကလားနော်
မိန်း မ ဆီ ဝင် သွား ရင် ပြန် မထွက် တာမို့ ( ပိုက် ဆံ နော် )
ဘော် ဒါများ နဲ့ သွား စရာပေါ် လျှင် ( လူ မှု ရေး ) သုံးရ စေကြောင်း —–။
ဒါ နဲ့အထက် ကဆွေး နွေး ပေး သွား သလို အခေါက် ဝယ် ထား ခြင်း ကို ထောက် ခံ ပါတယ် ။
ဒီ နေ့ တွေ့ရှိ ချက် ကတော့ ဆိုင် တွေ ကရောင်း တဲ့ အခေါက် ဆို တာ ကလည်း စက် နဲ့စစ် ကြည့် တဲ့
အခါ တော် တော် များ များ ရွှေ ရည် မပြည့် ပါ ။ ကျွန် တော် တို့ ခေတ် စကား နဲ့ ပြော ရင် ကျွန် တော် IC
ကြွ နေ ပါ တယ် ။ ဒါကြောင့် အသေး စိတ် လေ့ လာ ပြီး ရေးပါ ဦး မယ် ၊စီး ပွား ရှာ သူခြင်း ကိုယ် ချင်း မစာတာမဟုတ် ပါ ။ ဝယ် သူ များ ကို ကိုယ် ချင်း မ စာ သောကြောင့် ဖြစ် ပါ သည် ။ ကီ လိုရွှေ ရဲ့သိပ် သည်း ဆက ( ၁၆့၃၂) အကယ် ဒမီ ရဲ့ သိပ်သည်း ဆ က ( ၁၆့ ၂၄) ခန့်ကျွန် တော် တို့ဝယ် ကြရတဲ့
ရွှေ အခေါက် က ( ၁၆့ ၀၅) မှ (၁၆့ ၁၂) ခန့်။ ဝယ် ရင် ပေါက် ဈေး ၊ ရောင်းရင် သိပ် သည်း ဆ ရဲ့ ဈေး။
ရွှေဆို တာ မရှိဝမ်း စာ ၊ရှိ တန် ဆာ ——–။ ကောက် ညှင်း ပေါင်း လည်း မဟုတ် ပါ ၊နေ့တိုင်း လည်း မဝယ် နိုင်ပါ ။ ။။။။။။။။။
သဘောကျလို့ နောက်တခါ ပြန်ဖတ်ရင်း rate ပေးခဲ့တယ်နော်…။
အခုလို ရွှေဈေး တတ်နေတဲ့ အချိန် ရွှေဝယ်နိုင်ဖို့ဝေးသွားပြီနော် … ။ ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ် ပိစိညှောင့်တောက်ဥာဏ်လေးနဲ့ စဉ်းစားကြည့်တာ … ရွှေဈေးက အခု ခုနှစ်သိန်းခြောက်သောင်းငါးထောင်ဆိုတော့ ခုနှစ်သိန်းခွဲပဲ ထားပါတော့ … တစ်လကို ငါးသောင်းလောက်ပဲ ၀င်ငွေရှိတဲ့ လူဆို ဘာမှ မစားသောက်ပဲ ခြစ်ကုတ်စုတာတောင်မှ … ရွှေတစ်ကျပ်သား ၀တ်နိုင်ဖို့ … (15လ)ကြာမယ် …. တစ်လကို တစ်သိန်းဝင်ငွေရှိတဲ့လူဆို … ခုနှစ်လခွဲ ကြာမယ် .. တစ်လကို တစ်သိန်းခွဲလောက်ရမယ့်လူဆိုလျှင်တော့ … 5လနီးပါးကြားမယ် ..
ဒါတောင် ဘာမှ မစားသောက်ပဲ အသားတင်စုရမှာနော် … ။ ဖုန်းဘေလ်တတ်တာတို့ … အိမ်သုံးစရိတ်တို့ မပါသေးဘူး .. အဲ့ဒါတွေ နှုတ်လိုက်လျှင်တောင် .. ရွှေတစ်ကျပ်သားဝယ်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး …. ။ ရွှေဈေးကလည်း လိုက်ရင်း တက်ရင်းမို့ … ။
ကိုရီးယားကားတွေထဲကလို .. သတို့သမီးတောင် လည်ပင်းပြောင်နဲ့ ဆိုရင် .. ရွှေဆိုင်တွေ ထိုင်ငိုကုန်တော့မယ်
မှန်ပ ဦးဆာမိရေ။ ရွှေဝယ်ရင် အလျော့တွက်ကိုသေချာတွက်ခိုင်းကြည့်ပီးမှဝယ်တာအကောင်းဆုံးဘဲ။ အဲဒါပီးရင် ၀ယ်သူဘက်ကအရှုံးနဲ့ဝယ်ပီး အရှုံးနဲ့ပြန်ရောင်းရတဲ့ ဒီရွှေကို ကြာကြာအုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတော့မှာပေါ့။ အရေးပေါ်လိုအပ်ရင် အပေါင်ဆိုင်သွားလိုက်တာကမှ တန်ရာတန်ကြေးရသေးတာ။ (ဒါမျိုးကလုပ်နေကျဆိုတော့လေ)
အပေါင်ဆိုင်ဆိုလို့ .. ကျောင်းတတ်တုန်းက ရောက်ဖူးတယ် … ဟီးဟီး ..
ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ကြီး ရန်ကုန်မှာ ဆောက်တုန်း .. လူမဆံ့လို့ လူပေါင်း သုံးရာ မအူပင်မှာ 3လသွားတက်ခဲ့ရတယ် .. ဘာကုန်သလဲ မမေးနဲ့ ..ပိုက်ဆံများ တွင်းထဲကထွက်သလားမှတ်တယ် .. အဆောင်စရိတ် စားစရိတ် ၊ အပတ်စဉ်ပြန်စရိတ် စာအုပ်ဖိုး ကျူရှင်ဖိုးနဲ့ .. အိမ်က ထည့်ပေးသမျှ မလောက်ဘူး … ပိုက်ဆံပို့ပါဆိုတော့လည်း .. အသုံးလျှော့ချည်းပြောနေတာ … ပါလာတဲ့ နားကပ်ချွတ်ပြီး အပေါင်ဆိုင်ပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ .. နောက်နေ့ ချက်ချင်း လိုက်လာပြီး ပြန်ရွှေးပေးသွားတယ် .. အဲ့ဒီလို ဓါတ်ကြမ်းတိုက်ရတယ် ဟဲဟဲ
ကျွန် တော် မှားသွား တာလေး ပြင်ချင် လို့ —– ကီလိုရွှေ သိပ် သည်း ဆ ၁၉့ ၃၂ ၊ အကယ် ဒမီ က
၁၉့ ၂၄ ခန့်ဆိုင် တော် တော် များ များ မှာ ရောင်း တာ က ၁၉့ ၀၄ မှ ၁၉့ ၁၂ ခန့် 
အား လုံးဆော ရီး ဗျို့ ၊ ကျွန်တော် အိပ် ချင် မူး တူး နဲ့မှား သွား တာ ။။။။
၀ယ်ရင်ဈေးတက် ရောင်းရင်ဈေးကျ ဒါဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ထုံးစံလိုကိုဖြစ်နေပြီ..။ ၀ယ်ပြီးပြန်ရောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့ အရှုံးချည့်ပဲ..။